Kubhadhara | Tenga Bhuruu, Tsvuku, Violet, Green Laser Pointer - Lasers-Pointers.com
Debit / Kadhi rechikwereti
Iwe unogona kubhadhara zvakananga nekaundi yako kana kiredhiti kadhi kuburikidza neyeyedu yekubhadhara chikuva, 100% yakachengeteka, hatina mukana kune iyo data yekadhi rako.
Iwe unogona kusarudza nzira yekubhadhara yekutumira yekupinda muBBVA yedu kana ABANCA account. Kana kubhadhara kwacho kwaitwa, titumire kopi kune info@lasers-pointers.com. Usakanganwa kudoma zita rako uye surname mukuwedzera kune nhamba yekuraira.
Apple Bhadhara / Google Pay
Kana iwe uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uine iOS kana Android mudziyo unogona kubhadhara nekukurumidza uye nyore.